कोरोनाको ग्राफ उकालो लाग्दै २४ घन्टामा थप १४५९ संक्रमित « Etajakhabar
कोरोनाको ग्राफ उकालो लाग्दै २४ घन्टामा थप १४५९ संक्रमित
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७७, मंगलवार १६:४१
काठमाण्डौं । नेपालमा कोरोनाको ग्रँफ उकालो लागिरहेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर १ हजार ४ सय ५९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोरोना अपडेट मार्फत प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आज थपिएका सँगै संक्रमित संख्या ५६ हजार ७ सय ८८ पुगेको बताए।
मंगलबार देशभर १५ हजार ७ सय ७९ संक्रिय संक्रमित र होम आइसोलेसनमा ७ हजार ६ सय ४० जना रहेका छन् । डा. गौतमका अनुसार आज ७ हजार २ सय ५० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । गत २४ घन्टामा १ हजार ६२ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । यो सँगै रोग मुक्त हुने संख्या ४० हजार ६ सय ३८ पुगेको छ। संक्रमित मध्ये निको हुने दर ७१।५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैबिच, गण्डकी प्रदेशमा थप एकजना कोरोना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका ७० वर्षीय पुरुषको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ज्यान गएको हो । क्या न्स रका बिरामी रहेका ती व्यक्ति भदौ २५ गते अस्पताल भर्ना भएकामा २८ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनको सोमबार राति मृ त्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशभर कोरोनाका कारण मृ त्यु हुनेको सङ्ख्या ३१ पुगेको छ ।
पछिल्लो विवरणअनुसार प्रदेशमा चारजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । थप हुनेमा कास्कीका दुई, स्याङ्जा र गोरखाका एकरएकजना छन् । योसँगै प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन हजार ११६ जना पुगेको छ । सङ्क्रमितमध्ये एक हजार ८९५ जना निको भएका छन् ।